Elokenz: လူမှုမီဒီယာတွင်သင့်ဆိုဒ်၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသောအကြောင်းအရာများကိုအသိဥာဏ်ဖြင့်တင်ပါ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 1, 2020 အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 1, 2020 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်မူလကပင်ဖန်တီးမှုရှိကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ၄ င်းတို့၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါဆောင်းပါးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးသတိရစေမယ့်အရာပဲ။ ငါဟာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကိရိယာများနှင့်မဟာဗျူဟာများထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူဤခရီးစဉ်တွင်မလာခဲ့သော visitors ည့်သည်များရှိကြောင်းကိုမေ့သွားသည်
ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကြီးကြပ်မှုပါ။ ၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်၍ ဖြန့်ကျက်နေသဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းနှင့်၎င်းတို့ပြီးခဲ့သည့်လ၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့သည့်အလွန်ကြီးသောအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်၎င်းတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသောသက်ကြီးရွယ်အိုများပင်သတိမထားမိသူအချို့ရှိကြသည်ကိုမေ့နေကြသည်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များကိုအသုံးပြုရန် (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖွံ့ဖြိုးရန်) တွန်းအားပေးရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည် အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက် သူတို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်။ အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်မဟာဗျူဟာသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်သင်၏ site သို့ရောက်ရှိလာသော every ည့်သည်တိုင်း၏အကြောင်းအရာများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အဆင့်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ရန်သေချာစေသည်။ သင်၏အလုပ်သည်အကြောင်းအရာအသစ်များကိုအဆုံးမဲ့စီးဆင်းရန်မဟုတ်ပါ။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသင့်တွင်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုလုံးပြည့်စုံစေရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ကြီးကြပ်မှုတစ်ခုမှာဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုပြန်လည်နေရာချထားခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံ spammy ဟုထင်ရသော်လည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသင်ရရှိခဲ့သည့်နောက်လိုက်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသင်၏လူမှုမီဒီယာအသစ်များအားဖတ်ရှုခြင်းနှင့်နှိပ်ခြင်းများမရှိသောကြောင့်လိုအပ်သည်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုကွင်းဆက်စီးကဲ့သို့ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏စာကြည့်တိုက်ကိုသင်၏သွားရာအဆင့်တိုင်းတွင်နောက်လိုက်များအားမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်မလွယ်ပါဘူး အကယ်၍ သင်ဟာလူတန်းစားတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီး၊ သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့စေရန်လူမှုရေးအသစ်ပြောင်းခြင်းများကို upload လုပ်နေတယ်ဆိုရင်…အဲဒါက ဦး ဆောင်နိုင်ပါတယ် လူမှုရေးပင်ပန်းနွမ်းနယ်။ လူမှုရေးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားခြင်းအားမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်သင်နောက်လိုက်များထားခဲ့ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အသိဥာဏ်ပြန်တင်မှုများသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည် - အချိန်မီအောင်ပြုလုပ်သော်လည်းမကြာခဏမဟုတ်ဘဲအကြောင်းအရာအသစ်ကိုရောစပ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုမောင်းနှင်ရန်အကြောင်းအရာဟောင်းများကိုမကြာခဏလန်းစေခြင်း
Elokenz သင်၏အကြောင်းအရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်၊ သင်၏ပရိသတ်၏အပြုအမူအပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်အကြောင်းအရာသည်မျှဝေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းလေ့လာပြီးလူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှဝေမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အသိဉာဏ်ရှိပြီးအလိုအလျောက်ပြန်လည်ဖြည့်စွက်သည့်တန်းစီဖြစ်သည်။
Elokenz သည်ရိုးရှင်းသောအဆင့် ၄ ဆင့်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အကြောင်းအရာအပိုင်းအစတစ်ခုကိုတင်သွင်းပါ - သင့်အကြောင်းအရာများကို Elokenz သို့တင်သွင်းပြီးကိရိယာ၏စာကြည့်တိုက်တွင်ပြသထားသည်။
လူမှုမီဒီယာအကောင့်များကိုရွေးချယ်ပါ - သင့်ဆောင်းပါးများကိုပြန်လည်တင်ပို့မည့်ပလက်ဖောင်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏အကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရေးကို Elokenz ကဂရုစိုက်သည်။
မျိုးစုံ status ကို updates များကိုဖန်တီးပါ - Elokenz သည်သင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်လိုချင်သလောက်အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သင့်စာမူကိုတင်ပို့သည့်အခါတိုင်းဒီကိရိယာသည်မတူညီသောမူကွဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
သင်၏လက်လှမ်းမီမှုကိုဆန်းစစ်။ သင်၏အကြောင်းအရာကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ - ပလက်ဖောင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားအကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုကြည့်ရှုရန်အားပေးသည်။ မည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းသည် visitors ည့်သည်သစ်များအားဆွဲဆောင်ရန်နှင့် ဦး ဆောင်မှုပိုမိုရရှိရန်အတွက်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီကိရိယာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ် - Elokenz စာကြည့်တိုက်ရှိလူမှုရေးရှယ်ယာများကိုအချိန်ဇယားဆွဲရန်လွယ်ကူသည်။ ငါသည်သူတို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုချစ်ဒါကြောင့်ငါလူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုချင်းစီအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်အဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ရှယ်ယာတစ်ခုစီကိုလျှင်မြန်စွာတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
Lisa Sicard, ရှင်သန်ရန် Inspire
Elokenz နေ့စဉ်ဆိုရှယ်မီဒီယာအလုပ်များတွင်အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီးသင်၏အကြောင်းအရာများကိုအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်များပိုမိုရောက်ရှိရန်ကူညီသည်။ သငျသညျအသွားအလာမောင်းနှင်နှင့် ဦး ဆောင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ခုချင်းစီကိုဆောင်းပါးအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာတိုးမြှင့်သွားမယ့်အကြောင်းပြောဖို့မ!
သင်၏ရက် ၃၀ Elokenz စမ်းသပ်မှုစတင်ပါ
ထုတ်ဖော်: ငါတစ် ဦး Affiliate သို့မဟုတ်ဖြစ်၏ Elokenz.
Tags: တင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်elokenzFacebook ကlinkedinrepostပို့စ်များကိုအချိန်ဇယားဆွဲပါအကြောင်းအရာစီစဉ်ခြင်းလူမှုမီဒီယာပို့စ်များကိုအချိန်ဇယားဆွဲလူမှုရေးပင်ပန်းနွမ်းနယ်လူမှုမီဒီယာဆိုရှယ်မီဒီယာတန်းလူမှုရေး post ကိုတွစ်တာ